SUUNKA KALLUUMEYSIGA EE AMNIGA BEERTAADA - WARARKA
Haddii aad ka daalan tahay cayayaanka beerta beerta, soo iibso dabin waxtar leh - suunka xayiraadda.
Thanks to qalabkan casri ah, tirada cayayaanka ee keena dhaawac aan loo baahnayn geedaha khudradda ayaa si weyn u yareeya aaggaaga.
Caleemaha yaryar, caarada yaryar, aboorka, gawaarida ubaxyada, gawaarida roodhida, aphids, dhirta iyo cayayaanka kale ee yaryar ayaa ah kuwa ugu xun ee goosashada mustaqbalka ee berry iyo miraha beertaada.
Noocyada suunka xayawaanka
Qalabkaan fudud, oo si sax ah loo rakibay, wuxuu noqon doonaa caqabadda aan caqli-gal ahayn ee habka cayayaanka ee caleemaha cagaaran ee ugu horreeya ee geedaha beerta.
Suumanka kalluumeysigu waa:
Badanaa, suumanka qallalan waxaa laga sameeyaa warqad caadi ah (tuunbooyinka la tuuro) ama jiidis, burlap (dib loo isticmaali karo). Tani waa isbedelka ugu fudud iyo miisaaniyadda, iyo marka la barbardhigo noocyada kale ee suunka - waxtar ma laha. Sidee u shaqeysaa?
Geedka geedo midab leh waxaa lagu duuduubay warqad qaro leh oo si adag u xidhxidhnaa barkin ama cajalad si looga fogaado dhinacyo kala duwan ee cayayaanka. Marka cayayaanka ay ku socdaan qulqulka dabka, dabadeedna ku soo gali oo hoosta ku sii jir.
Waxaa habboon in la xiro suunka qalalan sida ugu dhaqsaha badan si ay cayayaanka u soo jiidaan taajkii geedkii guga si ay u joogaan muddo dheer. Bartamihii xagaaga, dabin qalalan ayaa la xirxiray qaloocsan oo ay weheliyeen ugxan-yaraha.
Kadib labadii todobaadba suumanka ayaa loo baahan yahay in la hubiyo, iyo cayayaanka soo ururay waa in la burburiyaa. Bannaanka xayawaanku waxay inta badan dejiyaan suumo qallalan dhammaadka xagaaga si looga hortago dhaqdhaqaaqa cayayaanka xilliga qaboobaha. Waxaa fiican inaad ka tagto qalabyada noocan oo kale ah ilaa guga, taas oo suurtogal u ah shimbiraha jiilaalka inay cunaan cayayaanka ku filan ee ku dhacay dabin.
Suumanka qallalan ee laga sameeyay dharka ama qalabka kale ee aan dhedhicirka ahayn waxaa laga sameeyaa hal ama laba lakab oo ah dabool ilaa 7 cm ballaaran.. Lakabyo badan, ayaa aad ugu kalsoonaan kara dabin.
Waxyaabaha ka mid ah suumanka sunta leh waxay la mid yihiin kuwa qalalan, laakiin horay loo gooyay nafleyda ama cayayaanka ka soo horjeeda cayayaanka. Sidaa darteed, qalabkan, oo lagu ilaaliyo filimka roobka, ayaa ka qaalisan kuwa caadiga ah ee qallalan oo aad waxtar u leh ficilka. Inta badan waxay ku xiran yihiin guga hore, iyo dayrta goor dambe waa la saaraa oo la gubaa.
Suumanka qalfoofka waxaa laga sameeyaa warqad qaabdhismeed leh, oo lagu daboolayo lakab qaro oo qafiif ah oo adag. Asal ahaan, sida dunta sida duufaan ah ayaa loo gooyaa jirridda guga ee height ah 10-12 cm dhulka. Xilliga dayrta waxaa lagu dejiyaa laanta hoose ee qalfoofka. Haddii qalinjebintu ay barafoobaan, oo aysan mar dambe u dhex marin qulqulka, markaas suunka suunka gunta ayaa ka wanaagsan inuu u beddelo mid cusub.
Xeerarka dejinta aasaasiga ah ee xabsiyada
Xaqiiji suunka suunka jilicsan. Waxyeelo kasta lama ogola, sababtoo ah cayayaanka ayaa sii wadi kara jirridda. Sidaa darteed, way ka fiican tahay in la nadiifiyo laga bilaabo jilicsan sannadkii hore ama in la suuniyo suunka dusha sare ee jirku.
Saar suunka hoose ee hoose ee jirridda, kahor inteyda koowaad, si aysan cayayaanka u dhaafin caarada foornada.
Kaadiradu waa qallalan yihiin oo sumeeyeen marka la rakibayo, way ka fiican tahay in la riixo qaybta kore ee shtambu, oo hoos ugu sii daa gadaal.
Gubashooyinka dabayshu waxay kuxiran yihiin hoosta iyo sare ee waxtarka weyn.
Suunka qalalan ee la tuuro, sida ku xusan taariikhda dhicitaanka, isticmaal hal mar. Ka dib markii la dalbado, ka saar oo baabi'iyo, laakiin mar dambe dhirta geedka. Haddii kale, waxaad heli doontaa keydid naxdin leh iyo waxtarka yar ee habsocodka.
Haddii aad tixgeliso dhammaan xeerarka aasaasiga ah ee ku rakibidda suunka xayawaanka, markaa waxaad badbaadin doontaa beertaada cayayaanka voracious.